Shure MV5C, ukuhlaziywa okujulile kwemakrofoni eguquguqukayo | Izindaba zamagajethi
UMiguel Hernandez | 22/05/2021 18:00 | General, Izibuyekezo
Amamakhrofoni nama-webcam wangaphandle abe yinto yesikhathi esedlule manje njengoba iningi labasebenzisi selikhethe i-laptop enamakhono akhelwe ngaphakathi, kanye nokuphakama kwamahedfoni angenantambo afaka imakrofoni ehlale iba ngcono. Kodwa-ke, i- "telecommuting", ukukhuphuka kokusakazwa ne-podcasting kusenze sashintsha izingqondo zethu kancane.
Ngalesi sikhathi sinemakrofoni yeShure MV5C, imakrofoni eguquguqukayo kakhulu enesiqinisekiso somkhiqizo owaziwayo. Sihlaziya lo makrofoni ngokujula, njengenjwayelo, futhi sikutshela amaphuzu aso aqine kunawo wonke, buthakathaka kakhulu.
2 Izici zobuchwepheshe
3 Isipiliyoni somhleli
Ngalesi sikhathi uShure ukhethe lokho abakubiza Ihhovisi laseKhaya, umbhobho ongaqondisiwe ngqo emphakathini okhokhelwayo kepha "kuzo zonke izethameli." Akungabazeki ukuthi lezi zingcingo ezinde, ezigcwele izinkinga ze-Zoom ziholele abakhiqizi balolu hlobo lwezesekeli ukudala isixazululo esihlakaniphile ezinkingeni ezithile, okuthile okufanele kwamukelwe. Yazalwa kanjena le MV5C, umbhobho ukuze Ihhovisi Lasekhaya kanye nemihlangano yevidiyo njengoba kusho uphawu olufanayo. Ngakho-ke, ukuba nesikhumba esikhulukazi kwideskithophu yakho akuyona inketho engcono kakhulu. UShure uzibophezele kubuncane njengoba sibona.
Isisindo: I-160 amagremu
Sinedivayisi engu-89 x 142 x 97 ngekhanda lokucabanga eliyindilinga ngokuphelele nesisekelo se-aluminium esenziwe ngamabhulashi ukuthi ngesikulufu kuzosivumela ukuthi silungise ukuqondisa kombhobho. Ngemuva kwaleli khanda eliyindilinga kulapho sizothola khona itheku lokuxhuma kwi-USB ne-3,5mm Jack yamahedfoni. Ngakolunye uhlangothi, endaweni engenhla kufundwa ilogo yomkhiqizo nenkomba ye-LED yesimo semakrofoni. Vele, kufanele sigcizelele ukuthi sifaka ikhebula le-USB-A ne-USB-C kuphakheji ngakho-ke akufanele sibe nezinkinga zokuhambisana.
Sinedivayisi enempendulo kuyo imvamisa 20 Hz kuya ku-20 kHz, idlula kude kakhulu imibhobho yendabuko efakwe ezincwadini zokubhalela. Kodwa-ke, le mpendulo yemvamisa iyashintshwa futhi izohambisana ne- ingcindezi yomsindo engu-130 dB SPL. Ngakolunye uhlangothi, sinomhumushi we-condenser nephethini ethandwayo ye-cardioid, kulayini wemikhiqizo uShure avame ukuyenza. Asinayo leyo yebo, noma yiluphi uhlobo lokuhlunga okusikiwe okuphansi, kanye nokuntuleka okufiphele nanoma yiluphi uhlobo lwephilisi elishintshashintshayo.
Umbhobho ulungiselelwe ukuba ube nempendulo eyisicaba, okungukuthi, ikakhulukazi ukwenza ngcono izwi. Ukucushwa cishe akukho, kuxhuma ngqo lokhu Shure MV5C Ngokusebenzisa ichweba layo le-USB kwi-laptop yethu ene-Windows noma i-Mac yethu, umthombo omusha womsindo uzovela ekudonselweni phansi kwe-Zoom noma kwamaTimu, ngempumelelo okuzoba umbhobho weShure. Ayinayo isoftware elandekayo (esiyihlolile) ngalesi sikhathi UShure ukhethe i-plug-and-play, okunengqondo ukubheka ukuthi lokhu ngokusobala kugxile kwifayela le- IHhovisi Lasekhaya.
Simi phambi kombhobho okusobala ukuthi ngeke usinikeze okuhlukile emakhulwini ezinkulungwane zemibhobho yangaphandle nganoma yisiphi isikhathi sokuthengisa. Inhloso yalo ukunikeza ukuxhumana okusheshayo nokulula, yingakho UShure usuke kude nezwe lobuchwepheshe ukuze afinyelele izethameli eziswele kakhulu njengamanje ngalo makrofoni we-MV5C, wabasebenzisi abanamakholi ngezingxenyekazi ezinjengeMicrosoft Teams usuku nosuku. Kodwa-ke, ukuthi uShure uphambukile enkambisweni yabo yendabuko akusho nakancane ukuthi bakwenzile kabi.
Yize i-Shure MV5C ingasiniki noma yiluphi uhlobo lwesipiliyoni somsebenzisi esihlukile kunezinye, inenzuzo yokuthi ezinyathelweni ezimbili nje senza ucingo noma ikholi yevidiyo lapho elinye iqembu lizosizwa khona ngokucacile, ngaphandle kokuphazanyiswa noma yiluphi uhlobo yomsindo, yilokho kanye uShure ayekufuna ngalokhu I-MV5C, nikeza isiqinisekiso nokuzola kwemiphumela ehlinzekwa ngumkhiqizo wakho, usuka ezilalelini ezifuna ukubanzima nokusebenza okuhlukahlukene. Kungakho i-Shure MV5C singasho ukuthi igcwalisa ngqo, hhayi ngaphezulu noma ngaphansi, ngalokho ekuthembisayo.
Umbuzo manje ngukuthi kufanelekile yini ukukhokha ama-euro ayi-105 okubiza le Shure MV5C, idivayisi okuthi, njengayo yonke imikhiqizo yomkhiqizo, inenani eliphakeme kancane ngokuqhathaniswa nomncintiswano. Sinemakrofoni ebiza uhhafu noma nangaphansi e-Amazon futhi lokho kuzosinikeza imiphumela efanayo, yize singeke sibe nesiqinisekiso se-Shure, ukwesekwa kuka-Shure noma kunjalo izinto zokwakha ezigcinwe kahle nezinto zokwakha. Futhi, le Shure MV5C iyimak mic yokukhetha ye Ihhovisi laseKhaya ngifuna okungcono kakhulu.
Kuthunyelwe ku: May 22 we-2021
Ukulungiswa kokugcina: May 22 we-2021
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Shure MV5C, ukuhlaziywa okujulile kwemakrofoni eguquguqukayo
UKobo wethula i-Elipsa yayo entsha, i-e-reader ephelele kakhulu